Ladies.Ny tanjona dia ny hisambotra na hampikatso ny sombin'ny mpanohitra. Ny mpilalao mahay mihinana tsirairay avy amin'ny sangan'ny mpanohitra dia mandresy amin'ny lalao. Miresaka momba ny iray amin'ireo lalao amin'ny birao izahay malaza sy nilalao teto ambonin'ny tany.
Ny lalao Checkers dia lalaovina eo anelanelan'ny mpilalao 2, amin'ny tabilao efatra, efamira efatra amby enimpolo mifandimby maivana sy maizina, miaraka amina faritany roa ambin'ny folo sy fotsy roa ambin'ny folo.
Checkers: Ahoana no filalaovana tsikelikely?
Mba hilalaovana checker an-tserasera maimaimpoana dia mila fotsiny ianao tohizo ireto torolalana ireto:
Raha vantany vao miditra amin'ny tranokala ianao dia hiseho eo amin'ny efijery ny lalao. Ianao ihany no tokony hilalao kilalao ary azonao atao ny manomboka mifidy ny fanefitra tianao fa tianao. Afaka mifidy eo amin'ny milalao namana ianao, ary aorian'ny fisafidianana azy dia ho afaka manomboka milalao ny lalao ianao.
Ankehitriny, hahita bokotra ilaina ianao. Afaka "Ampio na esory ny feo ", omeo ny bokotra "Play"Ary manomboka milalao, azonao atao"Pause"Ary"reboot"Na oviana na oviana.
Asaivo mihetsika ny mpanohitra anao fa sombintsombiny.
Rehefa avy nameno lalao iray dia tsindrio ny "reboot”Hanomboka indray.
Lalao Checkers: endri-javatra
"Damas"Lalao board izay efa nisy nandritra ny taonjato maro ary apetraka mifandimby ny filokana ary azo alaina ny mpifanandrina. Mandresy ianao rehefa tsy manana sombin-javatra intsony ny mpanohitra na nafindra ka tsy afaka mihetsika intsony.
Tanjon'ny lalao "Checkers"
Ny tanjon'ny "vehivavy" dia sakano ny hetsiky ny mpanohitra na manala sombintsombiny be loatra ka tsy afaka mihetsika intsony.
Lalao ho an'ny fianakaviana
Isan'ny mpilalao, taona ary fotoana filalaovana:
Tamin'ny taona 6
Sombina fotsy 12
Sombina mainty 12
Fitsipika tena tsotra ary, noho izany, mety ho an'ny mpilalao tanora kokoa, fa mahafinaritra ihany koa ho an'ny olon-dehibe.
Ny marina izany tsy misy mahalala tsara hoe oviana na tamin'ny fomba nanombohan'ny lalao, fa ny azo antoka dia efa nisy hatry ny ela ny Ladies, na izany aza Platon nandainga izy ho toy ny lalao nindramin'i Gresy avy tany Egypt.
Ny teôria voalohany dia ny kinova faharoan'ny Checkers dia lalao hita tao anaty fikarohana arkeolojika Ur, Irak. Ny fampiarahana amin'ny karbaona dia manondro izany ny lalao dia efa nisy sahabo ho telo arivo talohan'i Kristy.
Saingy, ity kinova heverina ho voalohany ity dia nampiasa tabilao hafa tsy dia miavaka, isan'ny sombin-javatra samihafa, ary tsy misy mahalala izay fitsipika marina.
Tany Egypt taloha, lalao antsoina Alquerque, izay nampiasa ny solaitrabe 5X5, dia lalao mifandraika amin'ny takelaka izay nilalao be tamin'izany.
Ny mpahay tantara dia nitady ny niandohany 1400 tal ary nambaran'izy ireo fa lehibe tokoa ny lazan'izy ireo ka nilalao tany amin'ny tontolo andrefana iray manontolo nandritra ny an'arivony taona maro.
Around 1100 taorian'i Kristy, Frantsay iray nanana ny hevitra filalaovana karatra teo amin'ny solaitrabe fanaovana catur. Midika izany fa hanitatra ny isan'ny sombin-javatra ho roa ambin'ny folo amin'ny lafiny iray. Ity kinova vaovao ity dia nantsoina hoe "Fierges"O well"Ferses".
Vetivety ihany koa dia takatry ny frantsay fa ny fanajana ny fitsambikinana dia nahatonga ny lalao ho sarotra kokoa ary nanapa-kevitra ny hiantso an'ity kinova vaovao ity "Hery Jeu".
Ny fanovana taloha dia noraisina ho lalao sosialy ho an'ny vehivavy ary nantsoina hoe "Le Jeu Plaisant De Dames" (The Pleasant Game of Checkers).
Avy amin'ny latabatra ka hatramin'ny solosaina
Miaraka amin'ny fitsipiky ny Checkers nofaritan'ny frantsay, ny lalao dia naondrana tany Angletera sy Amerika, nanohy ny fanapahana manerantany. Tao amin'ny G. Brittany dia nahazo ny anarana hoe " drafts "ary ilay matematika malaza William Payne nosoratany tamin'ny enim-polo dimampolo sy fito ambin'ny folo ny filazany momba ny filokana. Na izany aza, nandritra ny taona maro dia nitazona ny lazany i Damas.
Noho izany, fetra hetsika 2 no novolavolaina ho an'ny mpilalao efa za-draharaha, nanery azy ireo hanomboka ny lalao tsy kisendrasendra. Androany, fetran'ny hetsika hatramin'ny 3 no ampiasaina amin'ny fiadiana ny tompondaka.
Tonga tany amin'ny efijeran'ny mpandahatra programa solosaina ihany koa ny vehivavy efa talohan'ny Ady Lehibe Faharoa.
Na dia eo amin'ny sehatry ny fampandrosoana aza ny solosaina, ny tara-pahazavana Alan Turing namorona programa fototra ho an'ny Vehivavy izay mitaky fanaovana kajy hatao an-taratasy (noho ny mbola tsy nahavita ilay asa ireo masinina).
Farany, 1952 Taona miavaka teo amin'ny tantara maro loko ny lalao, rehefa Arthur L. Samuel namorona ny programa fanamarinana voalohany ampiasain'ny solosaina. Nihatsara tsikelikely ireo fandaharana lalao ireo satria nitombo ny hafainganana sy ny fahaizan'ny solosaina.
Tamin'ny volana Jolay XNUMX, ekipa iray avy amin'ny Oniversiten'i Alberta notarihin'i Jonathan Schaeffer no nanambara fa nahavaha ny lalao «dam».
Ny fandaharana Chinook , novolavolain'ny iray manontolo, dia nahatratra ny teboka iray tamin'ny fivoarany izay voaporofo fa tsy azo resena. Tamin'ity fomba ity, ny ekipa dia afaka nanaporofo fa ny lalao Checkers dia lalao fisarihana, izany hoe, hiafara amin'ny fisarihana foana izany raha samy manao ny fihetsika mety ny roa tonta.
Na izany aza, mitazona ny lazany ny lalao, miaraka amin'ny olona avy amin'ny lafivalon'izao tontolo izao milalao ny kinova samihafa ho an'ny fahafinaretana, mampiofana ny fisainany lojika, na mankafy fotoana tsara milalao miaraka amin'ny fianakaviany sy ny namany.
Ahoana ny filalaovana "checkers"?
Mpilalao iray no mahazo ny sombin-javatra fotsy, ny iray avy ny tsirairay amin'ireo singa mainty: iza no milalao inona ny loko, azon'ny mpilalao 2 atao mifantina eo amin'izy ireo.
Ireo singa ireo dia apetraka eo amin'ny laharana farany amin'ny tabilao mifanatrika.
Mandrakizay sy amin'ny toe-javatra rehetra dia atomboka amin'ny sombintsombin'ny maizina.
Ahoana no fomba filalaovana azy?
Ireo sombin-javatra dia apetraka mandrakariva ary amin'ny toe-javatra rehetra tari-dalana mivalona saha iray manatrika. Raha efa misy vato any an-tsaha, dia tsy azo atao izy io, na eo an-kianja ny vatonao na ny an'ny mpanohitra anao.
Raha sendra efamira mifanila amin'ny kianja mainty misy vato mifanohitra ianao dia azonao atao ny mamindra azy amin'ny fihetsika manaraka, raha mbola foana ny efamira ao ambadiky ny vato mifanohitra aminy. Mitsambikina amin'ireo singa mifanohitra ianao ary afaka mamoaka azy ireo hiala ny lalao. Voarara ny mitsambikina amin'ny sombinao. Tsy afaka miverina ianao afa-tsy amin'ny vehivavy.
Raha mahatratra ny laharana ambony amin'ny mpanohitra amin'ny vatonao, ny mpilalao mahazo mpanjakavavy iza no afaka mihetsika amin'ity toe-javatra ity amin'ny manaraka.
La Mahaleo mamaritra apetaho ny tapa-2 amin'ny iray hafa. Ho an'ity dia mila a anjara izay efa nesorina tamin'ny lalao.
Ny tombony dia izany afaka mihetsika miatrika ary miatrika miverina tsy ara-dalàna, izany hoe, afaka mandroso mifanatrika na lafika tarehy araka izay itiavanao azy ianao. Ny fametahana ireo sanganasa mifanohitra dia mitranga amin'ny fomba mitovy. Ny mpilalao tsirairay dia mahazo mpanjakavavy iray farafaharatsiny. Raha very ny mpanjakavavy noho ny tsy fahampian'ny fiheverana dia mety hahazo vehivavy faharoa ianao.
Resy ilay mpilalao voalohany nanao hetsika.
Inona no tanjon'ny "Ramatoa"?
Tsy maintsy maka ny tsirairay amin'ireo fihetsika mifanohitra amin'ny mpanohitra ianao mamely na manakana ny sombiny.
Ahoana no ahazoana an'i "Dama"?
Raha tsy misy mihetsika intsony ny mpanohitra dia mandresy ianao.
Ho an'iza no mety ilay "Ramatoa"?
Ny lalao kilalao "Daae" dia natokana ho an'ireo mpilalao te-hizaha toetra ny paikadiny stratejika sy taktika tsiroaroa. Lasa malaza manomboka amin'ny fahaenina taonany.
Ohatrinona ny vidin'ny "Ramatoa"?
Miankina amin'ny mpizara sy ny kinova, "Dame" miovaova eo anelanelany folo euro ho an'ny lalao tsotra sy 63 euros ho an'ny modely tena mendri-kaja.
Inona no ilaina amin'ny "Lady"?
Mikasika ny paikady, ny hetsika taktika ary ny fisaintsainana mialoha mba hanombohana tsara ny lamasinina.
Azo leferina ve ny mikapoka ny lamosin'ny "Checkers"?
Eny, raha afaka mametaka ianao dia afaka mametaka avy ao koa mifanila .
Mpanjakavavy tsy misy trondro: mihetsika diagonaly ny mpanjakavavy, miampita ireo toerana banga tadiaviny, miatrika mandroso na miatrika miverina, tsy mitondra sombin-doko mifanohitra aminy ary tsy azony ovaina io diagonal io.
Mpanjakavavy misy trondro: raha misy sombin-javatra hafa amin'ny diagonal-nao, ny feon'ny mpanohitra, ny trondro dia azo atao raha misy efamira foana na iray ao ambadiky ny ampahan'ny mpanohitra, tsy maintsy atao ny trondro. Tsy takiana amin'ny mpanjakavavy ny manohy tranokala aorian'ny sombintsombiny voasambotra. Fantatra erak'izao tontolo izao koa izy io, anisan'ny lalao malaza indrindra toa ny: chess, cite ary daomy.
Ny Checkers sinoa dia misy kintana 6 maranitra ampiarahina amin'ny alàlan'ny grid. Izay ipetrahan'ny tsipika, izany hoe, amin'ireo teboka, apetraka ireo chips. Ny tanjona dia afindra ny taila 15 miatrika ny tendron'ny kintana amin'ny fomba mifanohitra mivantana.
Ny fitsipika dia mitovy amin'ny an'ny vehivavy nentim-paharazana, miaraka amin'ireto fiovana manaraka ireto:
Ny tabilao dia apetraka miaraka amin'ny kianja fotsy amin'ny ilany havia.
Tsy afaka manao mpanjakavavy ianao.
Raha tsy mandray sombin-javatra ny mpilalao raha azo atao dia resy ny lalao.
Ny fitsipika mitovy tanteraka amin'ny tile mahazatra, afa-tsy izay ny mpilalao dia afaka misafidy ny hisambotra sombintsombiny fa tsy ny safidy tsara indrindra amin'ny adidy. Ny tombony tokana amin'ny mpanjakavavy amin'ny sombin-javatra mahazatra dia ny fahaizana mihetsika sy misarika ny tarehy hiverina ary hiatrika mandroso.
Ny fiovana tokana avy amin'ny lalàna ofisialy dia ny tsy fitifirana ny fitifirana ary raha misy ny fitifirana andiany, raha mandalo ny laharana farany ilay sanganasa dia hasondrotra ho mpanjakavavy ary hitohy ny lalao amin'ny maha-mpanjakavavy.
Angamba ilay vehivavy hafahafa indrindra amin'ny vehivavy nentin-drazana.
Ampiasao ny dashboard valo in-valo. Ny mpilalao tsirairay dia manana sanganasa enina ambin'ny folo ary mametraka azy ireo amin'ny laharana faharoa sy fahatelo akaiky azy ireo voalohany.
Mihetsika ireo sombin-javatra orthogonally, mandroso na miatrika mandroso, fa tsy mihemotra.
Voafandrika koa izy miatrika mandroso na manatrika ny sisiny. Mahazo ilay sombin-javatra tratra miaraka ho an'ilay iray nohazonin'ilay sombin-javatra voasambotra teo aloha, izay sakanana eo no ho eo (mandritra ny hetsika fa tsy amin'ny faran'ny tena izy).
Rehefa tonga any amin'ny laharana farany ny sombin-javatra lasa mpanjakavavy.
Ny mpanjakavavy dia afaka mamindra efamira foana foana araka izay itiavany azy miatrika mandroso, miverina miatrika na miatrika ny lafiny.
Ny trondro namboarin'ny mpanjakavavy iray dia nitovy tanteraka tamin'ireo sombin-javatra mahazatra, afa-tsy ny fahafahany mitsambikina amin'ny tsipika efamira tsy misy na inona na inona mandra-pahatonganao any amin'ilay sombiny voasambotra.
Isaky ny azo atao, Tsy maintsy atao ny trondro ary tsy maintsy atao mba hanesorana ny sisan'ny mpanohitra.
Ny fandresena dia azo avy amin'ny fisamborana ny tsirairay amin'ireo sombin'ny mpanohitra, ny fanetsehana azy na ny famelana azy, farafaharatsiny, tapa iray manohitra ny Mpanjakavavy.
Fiovaovana izay hitovizan'ny lalàna amin'ny lalao ofisialy, saingy amin'ity fiovana ity, ilay lany sombina no mandresy. Ny mpilalao, noho izany, dia tsy maintsy manolotra ny sombiny ho an'ny mpanohitra faran'izay haingana.
Fitsipika ofisialin'ny vehivavy
Lalao sy mpilalao
Fanatanjahantena ara-tsaina ny vehivavy nilalao teo anelanelan'ny olona roa.
Raha atao famaritana, ireo olona ireo no mpilalao.
3. Ny lalao zana-kazo lalaovina amin'ny tabilao toradroa izany, mizara ho kianja 100 mitovy, maivana ary maizina.
Atao ao amin'ny trano maizina izy io, antsoina trano mavitrika.
Ny tsipika mitongilana namboarin'ireo kianja maizimaizina dia diagonaly, miaraka amin'ny totalin'ny 17. Ny tsipika diagonaly lava indrindra miaraka amina efamira 10 ary manatevin-daharana ny zoro roa amin'ny solaitrabe dia antsoina hoe diagonal lehibe.
Apetraka eo anelanelan'ny mpilalao ny tabilao, ka ny diagonal lehibe dia manomboka eo ankavian'ny mpilalao tsirairay, ka maizina ny kianja voalohany amin'ny ankavian'ny mpilalao tsirairay.
4. Ny tabilao napetraka araka izany dia manana ny anarana manaraka:
Bases: sisin'ny tabilao eo alohan'ny mpilalao na takelaka satro-boninahitra.
hantsaka: ny andry lafiny.
vilia: tsipika marindrano misy kianja maizina 5.
Columns: tsipika mitsivalana misy efamira maizina 5.
5. Tamin'ny fivoriambe, boaty maizina dia isaina amin'ny isa ka hatramin'ny 1 (Fanamarihana Manoury). Ity fanisana ity dia tsy hatao pirinty amin'ny lovia. Raha mijery ny solaitrabe eo aloha ianao dia manomboka ny laharana miafina avy eo ankavia miankavanana, manomboka amin'ny kianja maizina voalohany eo amin'ny hazo fijaliana ambony ary mifarana amin'ny kianja maizina farany eo amin'ny tsipika ambany (Diagram I).
Azonao atao ny manamarina fa:
Ireo trano maizina dimy eo amin'ny toby na takelaka fananahana dia mahazo ny isan'ny 1 ka hatramin'ny 5 ary 46 hatramin'ny 50.
Ireo boaty maizina dimy ao amin'ny latabatra, na ny tsanganana voalohany sy farany, dia misy marika miaraka amin'ireo isa ireo 6, 16, 26, 36 ary 46 eo ankavia ary ny isa 5, 15, 25, 35 ary 45 eo ankavanana.
Ireo trano maizina sy tafahoatra amin'ny diagonal lehibe dia antsoina zoro birao.
6. Ny lalao International Checkers dia lalaovina vato fotsy 20 na mazava ary Vato mainty na mainty 20.
7. Alohan'ny hanombohan'ny lalao, ny Vato mainty 20 no mitana kianja 1 ka hatramin'ny 20, misy vato fotsy 31 ka hatramin'ny 50. Maimaimpoana ny efamira amin'ny 21 ka hatramin'ny 30 (Kisary 2).
Hetsiky ny faritra
8. Sombiny no antokom-pinoana ankapobeny vato sy andriambavy.
9. Miankina amin'ny vato na mpanjakavavy izy ireo, mihetsika ireo endrik'izy ireo ary miova endrika samy hafa. Ny fivezivezanan'ny efitrano iray amin'ny trano iray dia antsoina hoe "tolotra".
10. Ny hetsika voalohany dia hetsika ataon'ny mpamily fotsy foana. Ny mpilalao dia mifandimby milalao ny anjarany avy, mihetsika iray isaky ny mandeha.
11. Ny vato dia tsy maintsy mandroso, amin'ny diagonal, manomboka amin'ny trano itoerany mankany amin'ny trano maimaim-poana amin'ny lafiny manaraka.
12. Ny vato nahatratra ny satro-boninahitry ny satro-boninahitra ary nijanona teo tamin'ny faran'ny hetsika dia nasandratra ho mpanjakavavy. Ny fananganana ny vato dia voamariky ny mifanindry vato hafa mitovy loko.
13. Tolo-kevitra ny mpanohitra tanteraho ity fanjanahana ity.
14. Ny vato entin'ny vehivavy dia mitazona izany kalitao izany, saingy tsy afaka mihetsika izy raha tsy satro-boninahitra.
15. Ny mpanjakavavy vao satro-boninahitra dia tsy maintsy miandry mandra-pifanatrehan'ny mpifanandrina indray mandeha vao milalao.
16. Ny mpanjakavavy dia afaka mifindra amin'ny lafiny iray mankamin'ny ankilany, avy amin'ny trano izay ametrahana azy amin'ny lafiny hafa, amin'ny safidiny, amin'ny diagonal izay ialofany mankany amin'ny toerana malalaka.
Ny hetsiky ny sombin-javatra dia heverina fa nifarana rehefa navoakan'ny mpilalao taorian'ny namindrany azy.
Raha mikasika ny iray amin'ireo singany azo lalaovina ilay mpilalao nanao ilay hetsika dia voatery mamindra azy izy.
Raha mbola tsy navotsotra ilay vato nokasihina na mihetsiketsika dia avela hametraka azy amin'ny trano hafa, raha azo atao.
Ilay mpilalao miaraka amina hetsika izay maniry hametraka sombin-javatra iray na maromaro eo amin'ny solaitrabe dia tokony alohan'ny hanaovany izany dia alaviro mazava tsara ny mpanohitra miaraka amin'ny fitenenana "AJEITO".
17. Ny fandraisana ireo sanganasa mifanohitra dia tsy maintsy atao ary mandroso sy mihemotra. Ny tifitra feno dia isaina ho hetsika tokana nilalao. Voarara ento ny sombintsombiny.
18. Raha misy vato mifandray, diagonaly, miaraka amina sombin-javatra mifanohitra aminy, avy eo misy efamira poakaty eo amin'ny diagonal iray ihany, tsy maintsy mitsambikina ilay sombin-tany ary mibodo ny kianja malalaka. Ny ampahany manohitra dia esorina amin'ny solaitrabe. Ity hetsika feno ity, izay azo atao mandroso na mihemotra, dia ilay tifitra nataon'ny vato.
19. Rehefa eo amin'ny diagonal iray ihany ny mpanjakavavy sy ilay sangan'asa mifanakaiky na mifanalavitra ary misy efamira foana iray farafahakeliny ao ambadiky ny ampahany mifanohitra aminy ny mpanjakavavy dia tsy maintsy mamakivaky ilay sangan'asa mifanohitra aminy ary hipetrahany toerana malalaka aorian'ilay sombin-javatra, ny safidinao. Ny fandidiana toy izany dia ataon'ilay Ramatoa.
20. Ny outlet dia tsy maintsy atao mazava sy milamina. Ny tsy fisian'ny fanondroana mazava ny fitifirana dia mitovy amin'ny lesoka izay tsy maintsy ahitsy araky ny fangatahan'ny mpanohitra. Ny fandraisana dia heverina ho vita aorian'ny fanesorana ny hoditra na ireo faritra mifanohitra amin'izany.
21. Rehefa misy vato iray azonao dia nifandray tamin'ny diagonaly ilay sombin-javatra mifanohitra aminy, izay eo ivohon'ny kianja tsy misy na inona na inona, dia tokony hitsambikina ilay sombin-javatra faharoa, avy eo ny fahatelo sy ny sisa, hipetraka amin'ny habaka malalaka aorian'ny farany. mifindra. Voasambotra araka izany ny sombin'ny mpanohitra, rehefa vita ny hetsika, nesorina avy hatrany tamin'ny solaitrabe tamin'ny filaharana miakatra na midina. Ity hetsika iray manontolo ity dia antsoina hoe tifitra rojo vita tamin'ny vato.
22. Rehefa misy mpanjakavavy, rehefa maka, aorian'ny fitsambikinana voalohany, dia eo amin'ny diagonal iray ihany, akaiky na lavitra, avy amin'ny vato mifanohitra hafa, izay misy ao ambadiky ireo efamira tsy misy na maro hafa ireo, ny mpanjakavavy dia tsy maintsy mamakivaky ity sombin-javatra faharoa ity, avy eo ny fahatelo sy ny sisa ary mitana toerana malalaka, araka ny safidinao, aorian'ny sombin-javatra voasambotra farany.
Ny sombin'ireo mpanohitra dia voasambotra avy eo, rehefa vita ny hetsika, nesorina avy hatrany tamin'ny solaitrabe mba hidina na hidina. Ity fandidiana ity dia ilay fitifirana rojo notanterahin'ilay ramatoa.
23. Amin'ny tifitra rojo dia voarara mandingana trano.
24. Amin'ny tifitra rojo vy dia azonao atao ny mamakivaky ny kianja foana mihoatra ny indray mandeha, fa indray mandeha ihany ny sakan'ny mpanohitra.
25. Ny tifitra rojo dia tsy maintsy tanterahina mazava tsara, tsikelikely, mitsambikina, mandra-pahatongan'ny square farany. Ny tsy fisian'ny fanondroana mazava ny tifitra dia mitovy amin'ny lesoka izay tsy maintsy ahitsy araky ny fangatahan'ny mpanohitra.
26. Ny fihetsiky ny sombin-javatra mandritra ny fitifirana rojo dia heverina ho vita rehefa ilay mpilalao nandatsaka ny sombin-javatraNa amin'ny faran'ny na eo afovoan'ny hetsika.
27. Ireo sombin-javatra nalaina dia azo esorina fotsiny ao anaty lovia rehefa vita ny fitifirana rojo. Ireo sombiny voasambotra esorina izy ireo raha vantany vao mifarana ny hetsika ary amin'ny filaharana miakatra na midina nantsamborana,
Tsy misy fahatapahana. Ny fanafoanana ny sombin-javatra voasambotra dia mitovy amin'ny lesoka izay tsy maintsy ahitsy araky ny fangatahan'ny mpanohitra.
28. Ny fanafoanana ireo sombin-javatra dia heverina ho feno rehefa esorin'ny mpilalao ny sombin-javatra farany nalaina na rehefa ny Niato ny famonoana ny asa.
29. Ny fakana sombin-javatra betsaka araka izay azo atao ao amin'ny tadin'ny rojo dia tsy maintsy atao. Amin'ny fampiharana an'io fitsipika io dia tsy manao laharam-pahamehana na mametraka andraikitra ny mpanjakavavy. Ao amin'ny tifitra, ny vehivavy sy ny vato dia mitovy tongotra.
30.Raha ny sombintsombiny halaina, amin'ny fomba roa na maromaro, dia mitovy isa, ny mpilalao dia afaka misafidy ireo safidy ireo, na amin'ny vato na amin'ny mpanjakavavy, amin'ny fisamborana iray na maromaro.
31. Voamarina amin'ny Andininy 3.5, ilay vato izay nitifitra rojo vy dia namakivaky ny iray amin'ireo trano teo amin'ny hazo fijaliana coronation mifanohitra, amin'ny faran'ny fisamborana azy dia mbola vato ihany.
32. Raha nandritra ny lalao dia fantatra fa diso ny fametrahana ny tabilao, raha jerena ny lahatsoratra 2.4, ny lalao dia tsy maintsy foanana ary haverina.
33. Ireo andininy ao amin'ny andininy 2.8 tsy maintsy hamarinina alohan'ny hanombohan'ny lalao. Izay anomaly rehetra hita mandritra ny lalao dia voavaha amin'ny andininy 5.4.
34. Izay sombina rehetra ao amin'ny kianja tsy miasa (mangarahara) tsy miasa ary azo ampiharina amin'ny fampiharana indray araka ny laharana 5.4.
35. Raha manao ny iray amin'ireo tsy fanarahan-dalàna manaraka ity ny mpilalao dia ny mpanohitra ihany Zonao ny manapa-kevitra raha tokony ahitsy na tazonina ny tsy fanarahan-dalàna. tsy ara-dalàna:
36. Milalao hetsika roa misesy.
37. Manaova hetsika tsy ara-dalàna an'ny vato na andriambavy.
38. Milalao iray amin'ny anao manokana sombin-javatra ary milalao hafa.
39. Miverena iray hazakazaka vita.
40. Milalao sombin'ny mpanohitra.
41. Milalao sombin-javatra rehefa azo atao ny misambotra.
42. Esory ny sombin'ny mpanohitra na tompony ny tabilao tsy misy antony.
43. Makà sombiny ambany na avo kokoa noho izay faritan'ny fitsipika.
44. Mijanona alohan'ny faran'ny fijanonana rojo.
45. Esory ny takelaka iray amin'ny lovia, miendrika tsy ara-dalàna, alohan'ny hifaranan'ny plug.
46. ​​Esory, aorian'ny fisamborana, latsaky ny isan'ny sombiny nalaina.
47. Esory, aorian'ny fisamborana, ireo ampahany mbola tsy nalaina.
48. Atsaharo ny fisarihana ampahany amin'ny tadin'ny rojo.
49. Taorian'ny fisamborana, esory ny iray na maromaro amin'ny faritra misy anao.
50. Raha, noho ny antony tsy nahy, misy a fanovana na fanesorana toerana amin'ny lalao, ity zava-misy ity, voamarina tamin'izany fotoana izany, dia tsy azo raisina ho tsy fanarahan-dalàna.
51. Raha mandà ny hanaraka ny lalàna ofisialin'ny lalao ny mpilalao, manan-jo hampihatra izany ny mpanohitra.
52. Izay hetsika ataon'ny mpifanandrina amin'ny mpilalao iray izay nanao tsy fanarahan-dalàna na tsy mety manaiky ny lalàna ofisialin'ny lalao dia mitovy amin'ny fanekena ny tranga. Amin'izany fomba izany dia mifarana ny zon'ny fanitsiana.
53. Ny fanitsiana ampahany ny a tsy fanarahan-dalàna na fandikan-dalàna.
53. Ny lalao dia raisina ho fatorana raha ny laharana mitovy no aseho fanintelony ary ilay mpilalao iray ihany no tompon'andraikitra amin'ny hetsika.
54. Voamarina fa mandritra Hetsika 25 nifandimby, ny hetsiky ny takelaka ihany no namboarina, tsy nidina na nanetsika ny vato, dia heverina ho voasintona ny lalao.
55. Raha tsy mihoatra ny telo ny sombintsombiny, roa ny vato iray ary iray ny vato iray, iray ny iray ary misy vato roa mifanohitra amin'ny sombin-javatra iray, ny farany dia heverina ho fatorana aorian'ny fivezivezena folo farafaharatsiny.
66. Ny faran'ny mpanjakavavy roa, mpanjakavavy ary vato na mpanjakavavy amin'ny mpanjakavavy, dia heverina ho fatorana aorian'ny fivezivezena dimy farafaharatsiny.
77. Ny valin'ny lalao dia misy valiny roa:
Fandresena ho an'ny mpiara-miasa, ary noho izany faharesena ho an'ny iray hafa.
Mamatotra rehefa samy tsy maharesy ny mpilalao.
78. Mandresy ny mpilalao rehefa ny mpanohitra:
Mandao ny lalao.
Tsy afaka milalao ny fananana ny hetsika.
Very ny sombintsombiny rehetra.
Mandà ny hanaraka ny lalàna mifehy.
79. Misy fatorana rehefa:
Ny mpiara-miombon'antoka dia manambara izany amin'ny fifanarahana ifanaovana.
Fampiharana ny andininy faha-6.
Rehefa samy tsy afaka mandresy ny mpilalao.
80. Amin'ny alàlan'ny fanesorana ny isa avy amin'ny 1 ka hatramin'ny 50, mifanaraka amin'ny andininy 2.6., Azo atao ny mandinika ny fihetsiky ny sombin-javatra, ny fihetsehana isaky ny mihetsika, na mainty na fotsy, na firaketana ny lalao iray manontolo.
81. Ny fandikana ny hetsika dia tokony hatao toy izao:
Ny nomeraon-trano fanombohan'ny ampahany arahin'ilay laharana fanombohan'ny ampahany.
Ireny tarehimarika roa ireny dia arahin-tsipika (-) ho an'ny hetsika tsotra.
Raha raisina ny isa dia hosarahan'izy ireo a (X).
82. Ho an'ny fitenenana mazava dia ampiasaina ireto marika famantarana mahazatra ireto:
Milalao tsara na hetsika mahery:!
Tolotra tsara indrindra na matanjaka be: !!
Tolotra malemy na ratsy 😕
Tolotra tena osa na ratsy:??
Fanaraha-maso ny fotoana
83. Azo ifanarahana fa amin'ny lalao iray dia voatery ny mpilalao tsirairay avy manaova hetsika maromaro ao anatin'ny fe-potoana iray.
84. Amin'ity tranga ity dia tokony:
Manaova famantaranandro manokana amin'ny fifaninanana.
Raketo ny hetsika aorian'ny hetsika, ho an'ny mainty sy fotsy, ny lalao rehetra.
85. A fe-potoana ho an'ny lalao iray manontolo.
86. Amin'ity tranga ity, ny fampiasana famantaranandro fifaninanana dia tsy maintsy atao, saingy tsy ilaina ny naoty.
87. Manao ny famantaranandro dia fehezin'ny lalàna sy ny lalàna mifehy ny fifaninanana.